Nvidia Shield TV adịghị mkpa iji iwu 'Ok Google' oge niile | Androidsis
Enyemaka Google ekwesighi ikwugharị 'Ok Google' na NVIDIA Shield TV
Enwere nkọwa ụfọdụ nke nwere ike mee nnukwu ihe mgbe gị na igwe na-emekọrịta ihe dị ka ngwaọrụ dị iche iche nke enyemaka enyemaka ga-adị ezigbo mkpa. Otu n'ime ha bụ ikike maka ya ịmara ọnọdụ nke iwu olu onye ọrụ ahụ na-ekwupụta, ebe nkọwa ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ na anyị ekwesịghị ikwughachi otu ihe ahụ, dịka iwu ahụ 'Ok Google' .
Ọ bụ ebe a ebe onye enyemaka Google ga-etinyekwu mkpa na Nvidia Shield site na ịnwe nkọwa ahụ dị ka nnukwu ihe dị iche na ọrụ ndị ọzọ nke anyị nwere enyemaka nke Google mebere. Otu n'ime obere nkwarụ ndị nwere sistemụ ndị a bụ na ọ dị mkpa ka ị "kpọọ" ha na iwu dị ka 'Ok Google', n'agbanyeghị na njikwa Nvidia anyị nwere ike ichefu banyere inwe imeghachi ya na ọzọ
Na nke ohuru ma maa ọkwa Nvidia Shield TV, ịkwesịrị nye iwu ozugbo ma gaa n'ihu na mkparịta ụka ahụ site na ebe ahụ na-enweghị ịmeghachi ya ọzọ. Ọ nwere ike ịdị ka obere nkọwa na mbido, mana mgbe anyị jiri 'Ok Google' ọtụtụ oge n'ime nkeji oge, ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ihe ike ịnweghachi ya ọtụtụ oge.
Na vidio a bipụtara, egosiri Google Assistant na Shield TV n'ihi na ọ nwere ike ịjụ ya ihe oge niile na-enweghị ịgabiga 'Ok Google' na mmekọrịta ọ bụla site n'olu anyị nwere na ngwaọrụ ahụ.
Nvidia gosiri na CES 2017 na ọ dị na-arụ ọrụ na Google ka atụmatụ a rụọ ọrụ zuru oke. Ewezuga inwe ikike a ịghara ịmeghachi iwu ahụ oge niile, ọ ga-ekwe omume na Shield TV bụ naanị otu android TV nke ahụ na-enye nkwado maka ige ntị na-adịgide adịgide n'ihi na ọ gụnyere njikwa egwuregwu ma ọ bụghị naanị nke dịpụrụ adịpụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Enyemaka Google ekwesighi ikwugharị 'Ok Google' na NVIDIA Shield TV
2 Google Home akparị ụka ọ bụla ọzọ na a nnọọ ịtụnanya video
Samsung lekwasịrị anya afọ a na ire 60 nde Galaxy S8